China Hot Kutengesa yakagadzirirwa sze nemutengo wakanaka Kupeta Bhokisi Bhodhi fekitori uye vanotengesa | CHOKWADI PAPA
Kupisa Kutengesa yakagadziriswa sze nemutengo wakanaka Kupeta Bhodhi Bhodhi
5) Yakagadzirirwa sevhisi kune saizi yakakura yevatengi
1) Kuomarara kwakasimba uye yakanakisa kupeta kuramba.
2) Kugona kudhinda kugona.
3) Inochinjika kune mushure mekugadzirisa maitiro uye inogona kuiswa kune zvimwe zvinodiwa zvezvakasiyana zvigadzirwa pasuru.
4) Strict mhando kutonga.
5) Yakagadzirirwa sevhisi kune zvakasiyana zvinodiwa kune vatengi.
Inoshandiswa zvakanyanya muKupakata, Kudhinda uye Kuomesa:
1) Kuisa zvinhu zvemabhokisi madiki, senge chikafu, waini, toy, zvinodhaka, mabhokisi eshangu nevamwe.
2) Inoshandiswa zvakanyanya uye inopihwa munzvimbo yekudhinda, yega divi kudhinda kara, wobva wagadzira makatoni ayo anoshandiswa sekurongedza, kana anoshandiswa mukugadzira, zvigadzirwa zvemanyore.
3) Zvakare inogona kushandiswa seyakakosha tag, ndiro uye pombi ye blister kurongedza.
Yakaputirwa nematatu matete stong Pe yakavharwa kraft liner bepa.
BOPP firimu rakaputirwa, rakadonhedzwa pasimba rakasimba remapuranga, mana angles anodzivirirwa nebhokisi rekatoni.
3: Yakasarudzika pasuru yevatengi.
4: TDS nezve "NINGBO YAKATUNGWA"
3) Inochinjika mushure mekugadzirisa maitiro uye inogona kuiswa kune zvimwe zvinodiwa zvezvakasiyana zvigadzirwa pasuru.
Tinogona kukupa yemahara sampuro pls ndibate uye ndigovane yako yakajeka kero / post kodhi / munhu wekubata / foni nhamba.
Chenjedzo: Saizi saizi inogara yakaita pepa A4, kana uine zvakakosha zvaunoda, tiudze.
Pashure: Super C1S Kupeta Bhokisi Bhodhi / GC1 nyanga dzenzou bhodhi / Yakakwira Bulk muRoll uye Sheet
Zvadaro: OEM yakaputirwa C1S yakagadziriswa bepa Art bepa bhodhi
APP bepa bhodhi
C1s Ivory Bhodi Fbb
Ivory Bhodi 230 Gsm
Ivory Board Pepa 250gsm